Madaxweynaha Dalka Zimbabwe oo Afrika Ugu Baaqay Inay Ka Baxaan Qaramada Midoobe |
Dhaqaalaha & SiyaasaddaGanacsiga iyo DunidaHorumarka & Deegaanka ---OLD
Ayaanle Cabdi — January 31, 2016
Madaxweynaha dalka Zimbabwe Roberto Mugabe, ayaa Shirka Madaxda Midowga Afrika ee ka socda Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxa uu shalay ka jeediyay Khudbad kulul. Mugabe oo shalay wareejiyay Xilka Guddoomiyaha Midowga Afrika, ayaa sheegay wadamada reer Galbeedka ay yihiin kuwa Takoor ku haayo Afrikaanka.
Waxa uu sheegay Xarunta Golaha Qaramada Midoobay in laga raro dalka Mareykanka, loona raro dalalka kale, taasi ay noqonayso biloowga hidadiilada ay ku qancayaan Afrika. Mugaabe ayaa soo jeediyay in Waddamada Afrika Codka Diidmada qayaxan ee Veto Power-ka laga siiyo Afrika haddii kalena ay isaga baxdo Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey.
Madaxweynaha Zimbabwe waxaa uu ku taliyay in Afrika ay ka tashato Qaramada Midoobey, Cadaaladdarrada iyo Sinaan la’aanta ay kala kulanto Reer Galbeedka si ay uga baxdo. Waxaa uu sheegay in ay codsadeen Xubin joogto ah oo ay ka helaan Qaramada Midoobey,waana loo diiday ayuu yiri sidaa darteed waa in aan isaga baxnaa Qaramada Midoobey ayuu raaciyay hadalkiisa.
Hadalkan oo noqday mid soo jiitay Hogaamiyeyaasha Afrikaanka ah ee Shirka ka qaybgalay, ayaa Warbaahinta reer Galbeedka ay aad u hadal hayaan.
Next post Shanta Magaalo ee Yurub ugu Jeeb-siibka Badan